Izimpawu ukukhula komntwana ethunjini kusaqalwa
ukhulela ethunjini akuyona into enjalo ezingavamile esikhathini sethu, ngoba butholakala kuwo wonke amangqamuzana abesifazane. Futhi kuba njalo eyodwa nje, ukuthi umbungu okhula endaweni engafanele bona, ezifana e-amashubhu fallopian. Ngokwemvelo, nokukhulelwa enjalo kukhona ingozi discontinuity kwezitho zesifazane yangaphakathi, ngakho kufanele aphathwe ethunjini. Nobabili, tshelani siqonde, iziphi izimpawu ukukhula komntwana ethunjini e enkathini yokuqala x, uma kwenzeka ukuthi siyakwazi ukuwabona ke. Omunye angase athi manje abayikunqanyulelwa lutho musa ihluke izimpawu abavamile, ukukhulelwa evamile futhi akulungile. Nakuba empeleni, lo mehluko ezincane. Ngakho yiziphi izimpawu zokutheleleka ukhulela ethunjini kusaqalwa kuzosiza ukucacisa isikhundla efanele umbungu womuntu?
Kwesokudla nokuthuthukiswa okungalungile yokukhulelwa
Lapho ukukhiqizwa kwamaqanda kwenzeka, iqanda ezikhishwe iqala ukuhamba ngebhayisikili tube fallopian. Kube ahlangana sperm umsuka umbungu (avundiswa). Small, nje imfimbolo, i-embryo cilia ekhethekile iqala ukuthi unikezele phansi tube ne esibelethweni. Kule umbungu okhula ngayo ingane.
Lapho i ethunjini (engaphumi) sokukhulelwa esibelethweni avundiswa ngu isidoda, akayi esibelethweni bese linamathele igobolondo engaphakathi amashubhu fallopian.
Kungani ukukhula komntwana ethunjini kuyinto "omubi"
ukhulela ethunjini engasoze eziholela kokuzalwa komntwana, ngoba umbungu Kulokhu ufe kungakapheli amasonto ambalwa. Uma sibheka izibalo ihlanganiswe ngu gynecologists, singabona ukuthi isigamu ababa nakho abesifazane abaya kuwo ufika inkinga reception podbnoy, ngisho nokuwabona ukukhulelwa ngoba neze izimpawu amalungiselelo.
Uma ukukhula komntwana ethunjini is hhayi ziphathwe, njengoba kushiwo ngenhla, ngeke aphule amashubhu fallopian futhi abangele ezinzima ukopha zangaphakathi, okungaholela esibhedlela kanti, kwezinye izimo, zife sowesifazane.
Manje kwafika baphendukela kuyiyona nto ebaluleke kakhulu kulesi sihloko - yiziphi izimpawu of ukukhula komntwana ethunjini futhi indlela yokubona kusaqalwa. Kufanele ngokushesha kuqashelwe ukuthi zonke ezinkulu izibonakaliso ukhulela ethunjini kusaqalwa ngokuvamile ziqala ukuvela kuphela ngesonto lesithupha ngemva kokubamba. Lona ingozi main, kaningi kwenzeka, ukuthi ukungakhululeki, izici ezinengqondo eyinhloko ethunjini, ziqala ukuvela sekwephuzile.
Uma uqaphela okukodwa noma ngaphezulu zimpawu ezilandelayo, ungalibali ukuvakasha kuya wezifo zabesifazane. Mhlawumbe kulungile futhi lapho, kodwa kungcono ukuthatha isinyathelo ukuze uphephe kunokuba siyibukele phansi ingozi esondelayo emkhathizwe.
Ngakho iziphi izibonakaliso ukhulela ethunjini namuhla eyaziwa?
A ubuhlungu obuhlabayo esiswini ephansi. Kungaba eside noma ngezikhathi ezithile. Nobuhlungu obubangelwa iqiniso lokuthi izithelo ezikhulayo ngazo phezu kodonga tube nangaphezulu welula kubo.
osenyameni kwesitho sangasese mnyama kunokujwayelekile, nakuba ngezinye izikhathi kungase kungabi.
Kwezinye izimo, bangase ukuthuthukisa uhudo, ubuthakathaka ezinzima ukuvela.
ukopha Heavy ngokuvamile abonisa ukuthi kwepayipi. Ngenxa yalokhu kungenzeka ekuqulekeni. Owesifazane kumele ngokushesha esibhedlela.
Eyesibili umbuzo, okuyinto okunengqondo kulesi simo: kulokho eside singakwazi ukubona ukuthi ukukhula komntwana ethunjini? Yiqiniso, kungcono kakhulu ukukwenza ngokushesha ngangokunokwenzeka. Lapho kuvela izimpawu zokuqala zokukhulelwa (nge ukubambezeleka 3-4 izinsuku) ukwenza isivivinyo, ukuhlolwa kwegazi (ukuzimisela hormone sokukhulelwa egazini). Uma kuwukuzikhohlisa kuqinisekisiwe, kubalulekile ukuba kudlule ultrasound.
Waphatha ukhulela ethunjini ngeshwa, kuphela ngokusebenzisa ukuhlinzwa. Phakathi ukuhlinzwa, owesifazane isuswe kanye fallopian tube esibelethweni. Kulokhu, ikhono zezingane unciphe ngesigamu.
Uma uqala ukucabanga une ukhulela ethunjini, ungalibali Ukuvakashela udokotela. Futhi khumbula ukuthi impilo yakho kukuwena. Hlala uphilile!
Kwezinyanga ezingu-9 noma zingaki amasonto ukukhulelwa ihlala